अध्यक्षमा जितेपछि विहे गर्दै नविना लामा, को हुन् हुनेवाला श्रीमान ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← चीनको रेल लुम्बिनीसम्म जोड्न प्रस्ताव गरिने
चीनको स्वशासित क्षेत्र मकाउमा तामाङ घेदुङ संघ मकाउ स्थापना.. →
अध्यक्षमा जितेपछि विहे गर्दै नविना लामा, को हुन् हुनेवाला श्रीमान ?
Posted on 29/02/2016 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, १७ फागुन । लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय नेतृ नविना लामाले विहेको तयारी गरेकी छिन् । भर्खरै एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सर्वाेच्च पद अध्यक्षमा निर्वाचित नविनाले आफ्नो एक अन्तर्वार्ताका क्रममा छिट्टै विहे गर्ने खुलाएकी हुन् ।
उनले भनिन्- ‘बिहे भनेको कुरा मान्छेको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । त्यो निजी जीवनसँग जोडिएको कुरा हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो त्यो । केहि समयपछि बिहे गर्ने पक्षमा छु । तर कहिले गर्ने भन्ने मिति चाँहि फाइनल भएको छैन ।’
महासचिव हुँदा संगठनमा सफल कामहरु गरेकी नविनाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि थप जिम्मेवारी बढेको भन्दै संगठनलाई नमुना संगठन बनाउने बताइन् ।
को हुन हुनेवाला श्रीमान ?
नविनाका अनुसार उनका हुनेवाला श्रीमान अनेरास्ववियुकै एक जना नेता हुन् । उनको नाम भने खुलाउन मानिनन् । सँगै काम गर्ने क्रममा करिब ३–४ वर्ष पहिला प्रेम बसेको सुनाउँदै उनले परिवारको सहमतिमा प्रेमीसँग विहेको तयारी गरेको बताइन् ।
उनले ‘संगठनको काममा व्यस्त हुनुपर्छ । बाहिर घुमफिर गर्न जाने समय हुँदैन । फेरि पब्लिकली घुम्न जान पनि मिलेन । संगठनको कामकै क्रममा भेटहुन्छ । कुराकानी हुन्छ । त्यही हो डेटिङ हाम्रो त ।’ भन्दै प्रेम सम्बन्ध’bout वर्णन गरिन् ।(दैनिक नेपाल)